Avy any ampita: talenta vao tsara henoina i Hantcha | NewsMada
Avy any ampita: talenta vao tsara henoina i Hantcha
Manan-talenta ny Malagasy! Fehezanteny faheno matetika rehefa mby eo amin’ny kolontsaina ny resaka. Tsy eto an-toerana ihany fa hatrany ivelany. Raha vao sehatra lalovan’ny mpanakanto malagasy, samy natazanana izany fananana talenta kanto izany avokoa. Iray amin’ireo anarana ao anatin’ny fivelarana ankehitriny i Hantcha.
Hantcha, heverina fa mbola vitsivitsy ihany no mahafantatra izany anarana izany. Tovovavy malagasy, monina any Bordeaux Frantsa, any izy. Azo lazaina ho notezaina tao anatin’ny tontolon’ny mozika i Hantcha, satria mpitendry piano ny rainy. Namolavola azy kokoa ny fironana amin’ny mozika jazz, saingy, noho ny mozika efa mikoriana ao anatiny, mitety gadona maro ny fitiavany.
« Folk soul, world, jazz… » Mifanaraka tsara amin’ny feony miangola kanefa matanjaka sy migobongobona ireo gadona nosafidiany ireo. Miaina tanteraka ao anatin’ny mozika i Hantcha, araka ny nambarany. Heverina fa tsy vitsy ny mpankafy mozika ho liana hamantatra bebe kokoa ny talentan’ity tovovavy ity.
Toerana roa, hatreto, no fantatra fa hanehoan’i Hantcha ny talentany, amin’ity faran’ny herinandro ity, eto an-tanindrazana. Ny voalohany, ny alakamisy izao eny amin’ny Kudéta Urban club Anosy. Aorian’io, mbola hisy kosa ny fampiseoana hiarahana aminy, eny amin’ny Is’Art galerie Ampasanimalo, ny 21 desambra.